Komishanka oo sheegay xilliga ay ku dhawaaqayaan Natiijada hordhaca ah | Berberanews.com
Home WARARKA Komishanka oo sheegay xilliga ay ku dhawaaqayaan Natiijada hordhaca ah
Komishanka oo sheegay xilliga ay ku dhawaaqayaan Natiijada hordhaca ah
Hargeysa-(Berberanews)-Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka ee Somaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali (Riyo Raac), ayaa sheegay inay muddo 24 saac gudahood ah ay ku heli doonaan natiijada Hor-dhaca ah ee Doorashada Gollayaasha deegaanka iyo Wakiillada Somaliland, balse ay natiijada rasmiga ahi qaadanayso muddo toddobaaddo ah.
Guddoomiyuhu waxa uu sheegay in inkasta oo tirada codbixiyeyaasha la diiwaangeliyey ee doorashada ka qayb-qaadanayaa ka badan yihiin tirada dadkii codeeyey doorashooyinkii hore, balse ay komishan ahaan kalsooni buuxda ku qabaan inay natiijada hordhaca ah ku soo saarayaan muddo 24 saacaadood ah.
“Doorashooyinkan Hal milyan iyo ka badan ayaynu rejaynaynaa inay coddeeyaan, waxay u baahantahay in fursad loo helo in saxo tirinteedu. Haddii aannu culays badan jirin, Waxaanu rejaynaynaa oo ku kalsoonnahay muddo Afar iyo labaatan saacadood ah in lagu heli doono natiijada hordhaca ah ee degmooyinka.” Ayuu yidhi, balse wuxuu xusay in natiijada gobollada aannay cayimi karin.
“Natiijada kama dambaysta ahna runtii toos uma cayimi karno, laakiin sida qiyaasta komishanku qaadanayaa tahay, Toban casho iyo wixii ka yar inay qaadato ayaanu rajaynaynaa, waxayse ku xidhnaan doontaa umadda codaysay oo aynu oggaan doono ilaa Berri. Markaa Komishanku wuxuu diyaar u yahay in sida ugu dhakhsaha badan loo helo natiijooyinka si loogu dhawaaqno.” ayuu yidhi Guddoomiyaha Guddida Doorashooyinka Somaliland, Cabdirashiid Riyaraac.
Previous articleQisadii jacayl ee dhexmartay Sulfa iyo Aamina Jiisow
Next articleDjibouti oo u gacan gelisay Itoobiya saraakiil TPLF ah